Akụkọ - Ọnọdụ atọ nke ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ LED n'ọdịnihu
SF Series - Metal / Push-esiri
Usoro SA - Metal / Push-sere
Usoro ST - Metal / Threaded
SP Series - Plastic / Ziri ezi
Usoro SY - Plastic / Bayonet
Usoro WA22 - Plastic
Usoro WAC3 - Plastic
Usoro RJ45 - ụgbụ Ether
Usoro WP - Bayonet
Usoro WD - Metal / Threaded
Usoro WS - Maka naanị ime ụlọ
Usoro WF - Metal / Threaded
CEE 16A 32A IP67 nkwụnye
CEE 16A IP67 Elu Elu Elu
CEE 32A IP67 Elu Elu Elu
CEE 63A IP67 njikọ
CEE 63A IP67 nkwụnye
CEE 125A IP67 njikọ
CEE 125A IP67 nkwụnye
Weipu Crimp Ndi ana-akpo
Trendszọ atọ nke ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ LED n'ọdịnihu
Emetụta ike mmụba nke ụlọ ọrụ ikanam ụlọ na mmetụta dị mma nke atumatu gọọmentị, ụlọ ọrụ China na-aga n'ihu na-ekpo ọkụ n'afọ ndị na-adịbeghị anya, na-egosi ezigbo omume n'ihe gbasara oke na ogo. Fọdụ ụlọ ọrụ dị iche iche na-ebu amụma na ahịa ọkụ ọkụ nke China ga-enweta ọnụ ọgụgụ kwa afọ nke 26,9% n'etiti 2013 na 2018. Site na mmepe mmepe nke nnukwu uto, China ga-abụ otu n'ime ahịa ahịa ọkụ ọkụ na ụwa.
Agbanyeghị, ọ bụ ezie na ọnọdụ dị mma dị n'ihu, asọmpi ahịa na-arịwanye elu. Nye nwere ike ịlụ ọgụ na China ma nwee obi ụtọ na ahịa ọkụ? Nsonaazụ a amabeghị. Mgbe na-aga n'ihu na na-omimi mgbanwe na-eduga nkwakọ ụlọ ọrụ na ọtụtụ ndị na-emepụta nke oriọna na ọkụ na akụrụngwa, akwụkwọ achikota atọ mmepe na ọnọdụ nke China Ikanam ahịa na-eme n'ọdịnihu.
Ndzọ nke 1: ọgụ maka ọdịiche dị iche. Ngwaahịa nwere ọdịnaya teknụzụ dị ala ga-abụ "mpaghara ọdachi" nke homogenization. Na upgrading nke Ikanam uru yinye mpi, ọzọ na ndị ọzọ ikanam Nsukka na-aghọta mkpa nke ika iche. Iji mepụta ihe pụrụ iche ma mepụta uru ya na-enweghị atụ, ọtụtụ ndị na-emepụta na-ele anya na oghere silicone ngwa anya nke nwere ike ịkpụzi ya.
Nddị 2: ịmepụta ezigbo ngwa anya na teknụzụ dị mfe ga-abụ eziokwu Taa, ndị na-emepụta ihe eji emepụta ọkụ maka ngwa ọkụ ọkụ na-eche nnukwu nsogbu ihu: otu esi eme ka usoro nrụpụta dị mfe, belata ọnụahịa mmepụta, ma na-enye mma ngwa anya ka mma Site na ọganihu nke teknụzụ teknụzụ nke fluorescent, ọgbọ ọhụụ nke teknụzụ nkwakọ ngwaahịa ihe ọkụkụ nwere ike mezuo ebumnuche atọ a n'otu oge ga-akawanye nka. N'ọdịnihu, ndị nrụpụta nwere ike iwepụta ihe n'atụghị egwu, mebie usoro dị ugbu a na usoro mgbanwe na usoro mmepụta, ma mepụta ọnọdụ mmeri nke ọnụ na mma n'etiti ndị nrụpụta na ndị ọrụ.
Ndzọ nke atọ: Ngwaọrụ LED ga-emeziwanye arụmọrụ ọkụ na ntụkwasị obi. Maka ngwa ncha ọkụ na-acha ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ na-enwu ọkụ nwere ike melite arụmọrụ ọkụ na nkwụsi ike nke ngwaahịa. Mana ego iji kwalite mgbawa abụghị ihe dị ọnụ ala, nke na-eme ka ọtụtụ ndị nrụpụta flinch. Ọdịdị nke nnukwu ihe eji eme ihe na-emepụta ihe ndị na-eme ka silicone resin na-enye ihe na-efu ọnụ ma dị mfe iji melite arụmọrụ ọkụ na nkwụsi ike.
Iwuli 1-1005, Nke 3, Huaihai Hardware & Electromechanical Market East Mpaghara, Xuzhou Economic and Technological Development
Ekele maka ihe ịga nke ọma nke weebụ ...
Mmepe nke China cable na ...
Atọ na ọnọdụ nke Ikanam ọkụ ụlọ ọrụ na ...
Kpụrụ nke oghere mmiri: esi banye ...
Cikpụrụ nke oghere mmiri: Esi abanye na ...